Tsy novalin’ny fanjakana ny fitakiana : hitokona tsy misy fiafarany ny mpitsara sy ny «greffier» | NewsMada
Tsy novalin’ny fanjakana ny fitakiana : hitokona tsy misy fiafarany ny mpitsara sy ny «greffier»
Voarirarira sy nanaovan’ny fanjakana bemarenina. Nanapa-kevitra ny fivoriamben’ny Sendikàn’ny mpitsara (SMM) sy ny eo anivon’ny mpirakidraharaha fitsarana (SGM) fa hiroso amin’ny fitokonambe tsy voafetra izy ireo. Anton’izany ny tsy namalian’ny minisitera sy ny fitondrana ireo fitakian’ireto sendikà ireto.
Hiroso amin’ny fitokonana tsy voafetra, sady tsy hisy asa farafahakeliny, “service minimum”, ny sendikà roa, mpitsara sy ny mpirakidrahara fitsarana, manomboka ny alarobia izao, araka ny fanambarana iombonana tetsy Anosy, omaly. Samy niatrika fivoriambe avokoa ny roa tonta ary izao tapa-kevitra izao. “Efa niaraha-nahita hatrany ny antsojay mahazo ireo sendika nanao fitokonana tato ho ato. Eo ny fandroahana sy fanasaziana na fampiakarana eo amin’ny filankevi-pifehezana. Tsy hanaiky hatramin’ny farany izahay raha toa ka hiharan’izany ireo mpitsara na mpirakidraharaha manao fitokonana hiharan’izany”, hoy ny filohan’ny SMM, Fanirisoa Ernaivo. Na izany aza, milaza ho vonona amin’ny fifampidinihana ireto sendikà ireto, saingy tsy hanaiky intsony ny fampanantenana, mitarika fihemorana lava eo amin’ny fandraisana fanapahan-kevitra amin’ny famaliana ny fitakiana. Momba ny valin-tenin’ny minisitry ny Fitsarana amin’ny filazana fa efa mandeha ny raharaha, karazan’ny fandrirarirana izany, araka ny nambaran’ireto sendikà roa ireto. “Mijanona ho fampanantenana avokoa fa tsy misy tanteraka. Efa hatramin’ny volana jolay izany resaka izany. Mangataka izahay hoe mba homeo tetiandro telo na enim-bolana ny hahavitana azy io. Tsy misy valiny fa lasa mifandrebireby nefa samy olon-dehibe… Mety hoe tsy taitra ry zareo satria tsy zava-dehibe na laharam-pahamehana ny anay”, hoy ihany ny SMM.
Tompon’andraikitra ny minisitera sy ny fanjakana
Tsiahivina fa anisan’ny takin’ny mpirakidraharaha ny fanondrotana grady amin’ ny sehatr’asan’izy ireo. Mitaky ny fahaleovantenan’ny fitsarana sy ny tsy itsabahan’ny politika amin’ny asan’ izy ireo ary koa ny fampiharana ny tany tan-dalàna kosa ny an’ny SMM.
Midika izany fa hikatona avokoa ny lapan’ny Fitsarana sy ny rantsam-pitsarana rehetra manomboka ny alarobia izao. Miara-miasa sy mifameno rahateo ny asan’ireto mpiasa ireto ka hikatso avokoa izany ny asam-pitsarana rehetra. Anjaran’ny fanjakana ny mitady vahaolana mba tsy hiantraika any amin’ny vahoaka izao hetsika izao. Tompon’andraikitra voalohany ny minisitry ny Fitsarana.